Danjiraha Soomaaliya Ee Dalka Kenya Oo Booqday Dhadhaab – Somali Embassy Riyadh
September 4, 2015 webmaster Somalia News 0
Wafdi uu hogaaminayay danjiraha dawlada Soomaaliya u fadhiya Dalka Kenya Ambassador Jamaal Maxamed Xasan oo ay wehliyeen qunsulka safaarada Soomaaliya Cali Maxamed Sheekh( Cali Begadi),gudoomiye ku xigeenka hay’adda qaxootiga iyo barakacayaasha qaranka iyo Ra’uuf Mazuu oo ha madaxa hay’dda UNHCR ee dalkani Kenya ayaa maanta booqday xeryaha qaxootiga oo ay hooy u ah kumanaan Soomaali ah.
Wafdiga ayaa markii ay gaareen dhadhaab waxaa soo dhaweeyay mas’uuliyiin ka tirsan hay’adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee UNHCR,waxana loo gudbiyay xarunta Q.M ay ku leedahay dhadhaab,halkaasi oo ay warbixin ku siiyeen mas’uuliyiinta hay’adda UNHCR.
C/laahi Walid El Bah oo hay’adda UNHCr u qaabilsan xeryaha Dhadhaab ayaa wafdiga uu hogaaminayay safiirka warbixin ka siiyay xaaladaha qaxootiga soomaaliyeed ee ku nool Dhadhaab,isagoo in 95% qaxootiga ay yihiin Soomaali,waxana uu sheegay in ilaa 8 kun oo qaxooti ah isku diiwaan galiyeen in ay si mutadawacnimo ah ugu laabtaan dalkooda hooyo ilaa hadana la celiyay ilaa 3800 oo qof.
Safiirka ayaa xarunta UNHCR ee dhadhaab kula kulmay gudoomiyaasha xeryaha shanta ah ee ku yaalo dhadhaab,waxana uu ka dhageystay cabashooyinkooda,iyagoo su’aalo dhowr ah weydiiyay.
Danjiraha iyo mas’uuliyiintii la socotay ayaa dadka qaxootiga ah uga jawaabay su’aalihii ay weydiiyeen,iyagoo sheegay in cabashooyinka ay soo jeediyeen wax ka qaban doonaan.
Safiirka ayaa sheegay in safaarada ay qorsheynayso in xeryaha Dhadhaab ay furato xafiis si dhaw ula shaqeeyo qaxootiga soomaaliyeed ee mudada ku noolaa xeryahaasi.
Qunsulka safaarada Soomaaliya ee dalkani Kenya Cali Maxamed Sheekh (Cali Begadi) ayaa ka jaawabay su’aal ay mas’uuliyiinta safaarada weydiiyeen qaxootiga oo ahayd sababta aan qaxootiga soomaalida ee ku nool xeryaha Dhadhaab aan loo siin baasaboorka Soomaaliga,isagoo sheegay in safaarada ay ka fikreyso qaabkii ay qaxootiga soomaaliyeed ku heli lahaayeen baasaboorka.
Danjiraha ayaa kormeeray isbitaalka guud ee xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab oo ku yaalo xerada IFO 1,waxana uu xaaladooda caafimaad ka wareystay bukaanka jiifay isbitaalka.
Safarkan ayaa noqonaya kii ugu horeeyay oo uu safiirku ku tago xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab.